Indlu eqhelekileyo yaseTicino ukusuka ekuqaleni kweminyaka yoo-1900, inesitayile ngelixa igcina isimilo sakudala sesakhiwo. Ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela lisandul 'ukulungiswa kwaye lwenza ulwakhiwo lukhululekile.
Izithuba zangaphandle zikuvumela ukuba ujabulele ngokupheleleyo umbono weentaba ezijikelezileyo.
Ifumaneka kwiCentovalli, intlambo edume ngololiwe wayo omncinci owela imbonakalo yomhlaba entle kunye nokuzola kwayo.
Indlu ilungele iintsapho kwaye inokuhlala ukuya kuthi ga kwi-6 abantu (+ umntwana omncinci). Kukho amagumbi okulala amathathu abanzi anebhedi ephindwe kabini (160x200cm). Ibhedi yomntwana iyafumaneka (60x120 cm ubunzima max. 15 kg). Igumbi lokuhlambela lineshawa kunye nendlu yangasese. Le ndawo ikwanegumbi lokuhlala elikhulu elinebalcony, isofa, umabonwakude kunye nesitovu sepellet. Igumbi lokutyela lixhotyiswe ngetafile enkulu yabantu abafikelela kwi-10 kwaye likwaxhotyiswe nesitovu sepellet. Indawo yokutyela ekhitshini enendawo yokutshisa iinkuni ixhotyiswe ngefriji / ifriji, i-oven yomoya oshushu, isitovu sombane esineepleyiti ezi-4, i-slicer, umatshini we-coffee pod, iketile, i-toaster kunye nezinye izixhobo. Umatshini wokuhlamba ufakwe kwigumbi loncedo. Ngaphandle kwethafa elikhulu elijonge iintaba ezijikelezileyo, itafile yamatye kunye neambrela. Igrill yegesi ekhoyo.
Irhafu yabakhenkethi ayifakwanga kwixabiso, i-CHF 3.25 ngomntu ngamnye ukusuka kwiminyaka eyi-14 ngosuku kufuneka ihlawulwe ekuhlaleni.
ICosta di Borgnone liqhezu likamasipala waseCentovalli
ukuphosa ilitye ukusuka kumda kunye ne-Italy ngokukodwa kunye neVal Vigezzo kummandla we-Ossola. Yindawo ezolileyo kakhulu enelanga malunga nemizuzu engama-25 ukusuka eLocarno. Ilungele abathandi bendalo kwaye iboleka kuhambo olucebisayo. Kwintlambo yeVigezzo ekufutshane, intlambo yabapeyinti, ungandwendwela iimarike zayo eziqhelekileyo kunye neNgcwele yayo yaseRe.
Sifumaneka ngemibuzo okanye iingcebiso. Ayisoloko ikhona kodwa inokwenzeka yokunxibelelana ngefowuni.
Sithetha isiTaliyane, isiJamani, isiFrentshi, iSpanish kunye nesiNgesi.